Safarkii ugu dambeeyay ee sawirada 7 - Geofumadas
Safarkii ugu dambeeyay ee sawirada 7
Nofeembar, 2011 Leisure / waxyi, safarka
Ma jiraan wax la qabsan karo waddooyinka cad laba toddobaad ka hor. Hase yeeshe, inkasta oo ay tahay in la jaajuuso in la sameeyo si aan u dhicin qeylo dhaan ah, si uu u qaato gaari ka soo horjeeda ama inuu helo baabuur yar-yar oo dhexda u ah wadada ...
Ku soo dhawow meeshan, fadhiiso feejignaanta oo dareem nafta nabadda ku wareejisa qorraxda markaad kuhadalayso silhouette of volcano volcano ... qiimo halis ah. Aagga ayaa niyad-jab ku ah xaaladaha nololeed, hudheelka ugu fiican wuxuu ku baxaa US $ 6 habeenkii, hoos-u-dhigga, diiranaanta iyo diinta. Waxaa laga illaabay siyaasiyiinta xafiisyada, dadka asaliga ah, dabeecadaha dhaqameed ee aan ka muuqan buugaagta Cilmiga Bulshada, oo gaar ah oo kaliya in ay halkaas joogaan.
Inta kale ee safarka waxaa lagu soo koobay kaniisadaha, dhammaan midabada iyo dhadhanka. Waxaan xasuustaa 500 sano ka hor, markii dhaqanka asaliga ah ee Guancascos ee magaalooyinka lagu bedelay Xajka iyo shirarka Quduusiinta Quduuska ah ... yaa garanaya sida uu horay u sheegi lahaa.
Way adag tahay in maanta halkaa lagu tago, iyada oo la isticmaalayo gawaarida xashiishka ah iyo jidadka ballaaran. Aynu sheegno sida ay u noqon lahayd in la keeno dhagax, lime, ciid iyo foosha mararka soo dejinta bahal ka soo jasiiradda waxay u dhigantaa keenista BMW.
Qalabka dhismuhu wuxuu u qaabeeyay qaab kasta, laga soo doorto golaha, dhisme sare oo loo dhoofiyo goobta, inta soo hartayna waxay ku dhowdahay bilaash.
Qaybta sheekada waa la lumay, iyo waxa lagu heshiiyey by chronicler la qoray ama la tirtiray.
Haa ... inta soo hartay waxaa lagu soo koobay kaniisadaha. Waxay keenaan wax nastalgia ah, oo qoraal ah, laakiin maaha nolol dhab ah. Way fiicantahay in halkan la kulanto dadka lala tashado, dadka ka baxa raaxada si ay naga dhigaan kuwo wanaagsan, farsamooyinka ugu fiican ee aan soo goostay sanadihii la soo dhaafay.
Marka qorraxdu dhacdo, markaa qabowgu mar kale, waxa uu ku qanacsan yahay inuu ku fariisto waddo leh koob wanaagsan oo kafeega ah, qosol ku ah nolosha iyo xusuusta fogaanta Tweeter, adduunka ayaa ku sii socdo.
Inaad guriga tagto, qolka qolka iyo jiifinta nalaga dhigo ... wuxuu naga helaa daal badan oo nagu filan nolosheena ... mar kale.
Post Previous«Previous Koorsada "AutoCAD" oo leh macallin online ah
Post Next GPS size size silsilad muhiim ah iyo telefoonada off-roadNext »
4 Jawaab: "Safarkii ugu dambeeyay ee sawirada 7"
Melissa isagu wuxuu leeyahay:
Febraayo, 2012 at
Waan jeclahay maqaalkan! Sawiradu waa kuwo aad u qurux badan.
Jose Romero isagu wuxuu leeyahay:
Diseembar, 2011 at
Mahadsanid! Ma aqaano Lempira.
Santa Cruz, Piraera, La Campa, San Manuel Colohete iyo San Sebastián. Dhamaan dawladaha hoose ee waaxda 'Lempira'. Dalka Honduras
Halkee kaniisadahan ka socdaa?